Maxamed Cabdullaahi oo soo dhisaya xukuumad - BBC News Somali
Maxamed Cabdullaahi oo soo dhisaya xukuumad
31 Oktoobar 2010
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay in Maxamed Cabdullaahi uu noqdo Ra'iisal Wasaaraha Dowladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya.
Maxamed Cabdullaahi waxaa ansixiyay 297 cod halka 92 cod diideen 2-na ay ka aamustay sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Shiikh Adan.
Ra'iisal wasaaraha oo uu hore u magacaabay Madaxweynuhu, waxaa cod u qaadistiisa ka dhashay khilaaf aad u weyn oo baarlamaanku ku kala qeybsamay in codku ahaanayo gacan taag iyo in uu ahaanayo qarsoodi.
gacantaag mudanayasha wata oo uu horseed u ahaa Madaxweynuhu ayaa waxay dagaal siyaasadeed la galeen kooxda wadatay codka qarsoodiga oo uu horkacayay Guddoomiyaha Baarlamaanku.
Guddoomiyuhu wuxuu ku doodayay in gacantaagga ay weydiisteen xubno ka tirsan baarlamaanka, sida xeer hoosaadku qabana tooda la raacayo.
Madaxweynaha iyo inta la socotaa waxay jku doodayeen inAxdi Qarameedka aanay arrintaasi ku caddeyn sidaa darteedna loo laabanayo Dastuurkii 60-kii.
Si kastaba ha ahaatee, hanjabaad xagga sharciga ah iyo mid siyaasadeed intaba ayaa lagula kacay Guddoomiyaha oo isagu ka dib markii uu dhowr fadhi la yeeshay Madaxweynaha, oggolaaday in codku gacantaag noqdo haddii ay oggolaadaan xubnihii marka hore codsaday qarsoodigu.
Ma cadda waxa ay labada dhinac ku heshiiyeen, laakiin Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka oo ahaan jiray laba mas'uul oo aad isugu dhow, xog badanna iska og, laakiin in muddo ah la hadal hayay in khilaaf ka dhexeeyo, ayaa arrintani ay bannaanka khilaafkooda.
Si xukuumadda Maxamed Cabdullaahi ay wax u qabato bilaha fara ku tiriska ah ee ka haray xilliga KMG-ka, waxaa khasab hoggaamiyayaasha dalka ugu sarreeya waa Madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanku in ay xalliyaan khilaafkooda.
Baarlamaanku wuxuu weydiistay Ra'iisal Wasaaraha cusub in uu soo dhiso Golihiisa Wasiirrada.